Fikiradda ah in Koobka Adduunka laga dhigo 48-xul oo taageero xoogan helaya – Gool FM
Fikiradda ah in Koobka Adduunka laga dhigo 48-xul oo taageero xoogan helaya
Byare December 28, 2016
(World) 28 Dis 2016. Fikradda ah in koobka adduunka laga dhigo 48 xul ayaa taageero ka helaya xiriirada kubbada cagta adduunka, sida uu sheeganayo madaxwaynaha cusub ee FIFA Gianni Infantino.
Markii uu Infantino u tartamayay xilka Madaxtinimo ee xiriirka kubbada cagta aduunka ayuu ku daray qorshihiisa inuu xulalka koobka adduunka kordhin doono isagoo gaarsiin doona ilaa 40 halka ay iminka yihiin 32.
Bishii October, wuxuu madaxwaynaha qishay in xitaa la sii blaarin karo iyadoo la gaarsiinayo 48-xul, waa aragti uu aaminsan yahay iminka in la gaari karo maadaama ay hesato taageerada loo baahan yahay.
“Weli waxaan ku qancsanahay inaan ballaariyo ka soo qeyb galka koobka adduunka in ka badan 32-xul,” Shirka ciyaaraha caalamiga ee Dubai lagu qabtay ayuu sidaa ka yiri madaxwaynaha FIFA.
“Weli waxaynu ka fikireynaa inaan kor dhino tartanka 40 ilaa 48-xul. Koob ka kooban 48 xul wuxuu lahaan doonaa waqti la mid ah midka hadda, xiriiradda kubbada cagtana dhammaan waxay door-bidayaan koob adduun oo xulal badan leh.”.
Qorshaha cusub ee lagu kordhinayo xulalka ka soo qeyb galaya koobka adduunka uma badnaan doonto in la dhaqan galiyo wixii ka horreeya 2026, laakiin go’aanka ku aadan arrinka waxaa la qaadan doonaa bisha Janaayo.
Xiriirka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa qaaday tallaabo la mid ah midan iyadoo kordhisay xulalka Yurub u matalaya koobka qaaradooda ee Euro.
Wuxuu ahaa 16-xul oo waxaa laga dhigay 24- xul ka hor koobkii Euro 2016 ee lagu qabtay Faransiiska isla markaana uu ku guuleystay xulka Portugal.
Barcelona, Real Madrid iyo Man City oo isku haysta saxiixa Julian Weigl
Klopp oo ka hadlay in Guardiola uu xalay xaadir ku ahaa Anfield ka hor kulankooda